Indlu yeholide yaseLohjaoja (yezimvu) eLahemaa
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguAndri
Ikhaya leeholide laseLohjaoja liseLahemaa, lijikelezwe lulwandle, izibuko elidala, ihlathi, umlambo kunye nechibi. Xa ubhukisha ikhaya lethu elipholileyo, uya kuba nendlu entle yesauna, edityaniswe nethayile enkulu. Ehlotyeni ungahamba ngebhayisekile okanye uhambe intaba ukuze ufumane zonke iindawo ezikufuphi, ungakha amaqunube kunye namakhowa ehlathini. Kwindlu ye-sauna, kukho yonke into ekhoyo yebarbecue elungileyo. Ebusika ungaya kutyibilika elwandle, ukonwabele i-sauna kwaye utsibe ekhephini :)
Ngokubhukisha indlu yeholide yaseLohjaoja, uya kufumana izindlu ezimbini-enye njengekhaya, enye njengendlu ye-sauna. Zombini ezi zinto ziqhagamshelwe kwi-terrace, ngoko ke kukhululekile ukuhamba phakathi kwezi zimbini.
Zombini ezi zindlu zintsha kraca, zakhiwe ngothando nenkathalo. Kukho iinkcukacha ezininzi eziphantsi komhlaba, ubugcisa obuhle kunye neembono ezintle. Uya kuba nayo yonke into onokuyidinga ekhitshini, ungonwabela ubushushu obuvela kwiziko kunye nokuzola ngaphandle.
Indlu ye-sauna iya kukunika amava aqinisekileyo, ngenxa yesitofu sayo sokhuni. Unokuba nebarbecue ecaleni kwayo kwaye ukonwabele ukuhlala ngaphandle kwi-terrace.
Indawo ikhethekile, kuba ijikelezwe lulwandle, ichibi, umlambo, ihlathi, iPaki yeSizwe kunye nechweba elidala. Yonke into ethandwa ngumthandi wendalo, ikufuphi.
Umbuki zindwendwe ngu- Andri